72- Ilaaladii Daatu-sulaasil
Dagaalkii Mu'ta markii laga soo laabtay ayaa waxaa la maqlay in reer Qudaaca oo Shaam degganaa u tabaabushaysanayo sidii uu Madiina ugu soo duuli lahaa, markaas ayuu Rasuulku SCW wuxuu bishii Jamadul-Aakhir, sannadkii 8aad ee hijriga u direy ciidan 300 oo nin ah, uuna madax uga dhigay Camar binu Caas.
Camar iyo ciidankiisii markii ay reerkaas u dhowaadeen ayey ka war heleen in ay ciidan aad u tiro badan hastaan, markaas ayey Rasuulku SCW u soo direen Raafic binu Mukeyth si uu Rasuulku SCW ugu soo diro ciidan siyaado ah. Rasuulku SCW wuxuu ku soo daray ciidan 200 oo nin ahaa, oo ay ku jireen Abuubakar iyo Cumar, wuxuuna madax uga soo dhigay Abuu Cubeyda ibnu Jarraax. Ciidankani markii uu ku biiray ciidankii hore ayaa waxa labadii ciidan hogaamiye u noqday, salaaddan tujinayey Cumar binu Caas.
Ciidankii markii ay gaareen dhulkii cadowga ayey jihadii ka luntay oo waxay gaareen meeshii ugu shisheysay dhulka cadowga halkaas oo ay kula kulmeen ciidan, ka dib dagaal ayey ku qaadeen hase yeeshee cadowgii waa baqday oo kala cararay. Camar wuxuu Rasuulka SCW u soo diray Cawf binu Maalik si uu ugu sheego in ay nabad qabaan oo ay guuleysteen, muddo ka dibna Madiina ayey ku soo laabteen.